Daaweynta Canbaarta ee dayrta | February 2020
Noocyada Kumquat iyo sharraxaadda
Editor Ee Doorashada February 29,2020
Ugu Weyn Ee Daaweynta Canbaarta ee dayrta
Barashada canab lagu beeray xilliga dayrta: talooyin wax ku ool ah
Canabku waa mid aad u faa'iido leh sababtoo ah waxay ku jiraan fitamiin, macdan, walxo antioksidant. Ha aamusin, iyo dhadhanka. Canabku wuxuu ku xidhan doonaa carrada, mana u baahna daryeel gaar ah. Taasi waa sababta ay u jecel yihiin koritaanka. Laakiin, ficil ahaan, waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan daryeelka ee dalagga this, iyo midka ugu caansan waa transplantation canab, oo lagu sameeyey xilli-deyrta.
Sida loola tacaalo cudurada waaweyn iyo cayayaanka ee streptocarpus
Digaagga la jilciyey
Broiler iskaga gudbaan ROSS-308
Halbeegga iyo sifooyinka wanaagsan ee huurka ee haweenka
Xayawaan badan oo badan iyo milkiilayaasha lo'da ha ka fekerin magaca xoolaha, hana ku dhejin feejignaan gaar ah waqtigan. Si kastaba ha noqotee, lo'da aad u dareen badan ayaa u leh dhawaaqyada iyo lakulanka, waxay si sahlan u xusuustaa naaneyska lafteeda, waana kalkaaliye caafimaad oo qofkisa oo dhan uu ku tiirsan yahay. Sidaa darteed, xulashada magaca xayawaanku waxay u fiican tahay in la qaato wakhti. Read More
Kala duwanaanta caanaha - yaanyo "Saarid": sharaxaad, astaamaha sii kordhaya
Caleenta lingonberry: faa'idada iyo waxyeelada, guryaha dawooyinka iyo ka hortaga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daaweynta Canbaarta ee dayrta 2020